Yechipiri beta yeTVOS 10.1.1 uye watchOS 3.1.3 yevagadziri | Ndinobva mac
Iyo yechipiri beta yeTVOS 10.1.1 pamwe neiyo beta 2 yewatchOS 3.1.3 ivo vari zvakare musimba revagadziri. Apple inotanga vhiki yechipiri yegore idzva iri neshanduro dzebeta dzese dziripo masisitimu anoshanda, kusanganisira, mune iyi kesi, yevanogadzira. Nezve nhau dzinowedzerwa mune idzi beta vhezheni kune vanogadzira zvatova pachena kuti Apple haigadzirise kunze kwekuvandudzwa kwekuita uye kugadzikana kwese, saka zvishoma kana hapana chingataurwa izvozvi.
Vakomana veCupertino vanojekesa izvozvo iyo inotevera vhezheni yeApple Watch iyo yavanotanga ichave iri yepamutemo 3.1.3 Uye sekutaura kwatakaita muchinyorwa cheiyo nyowani vhezheni yeMacOS Sierra 10.12.3 beta 3, zvinoita sekunge varonga kuvhura iyo yekuvandudza iyo yavakasiya yakamirira nekuda kwematambudziko ekuenderana. Panyaya ye tvOS 10.1.1 beta 3, izvo zvinowedzerwa zvinoenderana zvakare nekugadzikana kwesisitimu uye mhinduro yezvikanganiso zveiyo yapfuura beta vhezheni yakaburitswa pasati pazororo reKisimusi, saka zvishoma kana hapana chinogona kutaura pamusoro peizvi. Kana zvikaitika kuti kunatsiridzwa kwakakosha, tichazviparadzira.
Dzese idzi shanduro dzevagadziri Ivo ikozvino vakagadzirira kurodha pasi kubva kunovandudza nzvimbo uye kubva kuchishandiso pachacho kuburikidza neOTA Kana iwe uchinge watove neshanduro dzapfuura dzaiswa, asi rangarira kuti beta vhezheni ichiri iyo, betas, uye nekudaro inogona kukonzera kukundikana mune chako chishandiso kana kusapindirana nechero ipi yeapplication iwe aunoshandisa zuva nezuva, saka zano nderekumirira kune zviri pamutemo shanduro kana vanosunungurwa neApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Yechipiri beta yeTVOS 10.1.1 uye watchOS 3.1.3 yevagadziri
Nei mari dzakavanzwa mukati memamwe MacBooks?
MacBook Pro kupfura kunoponesa murume muFlorida